Dawlada Uganda Oo Bilowday inay Ciidankeeda kala Baxdo Soomaaliya. – Heemaal News Network
Alshabaab Oo Madaafiix Ku Gaarcday Saldhig Ay Leeyihiin Ciidanka AMISOM
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa tiro Madaafiic ah oo Al Shabaab ay ku garaaceen Saldhigga ciidamada Amisom ay ku leeyihiin deegaanka Husingow ee Gobolka Jubbada hoose. Madaafiicdaan oo ahaa kuwa gaaraya illaa Shan […]
Dowlada Brundi Oo Shaacisay Tirada Askarta Looga Dilay Weerar ka Dhacay Duleedka Balcad.
Dowladda Burundi ayaa xaqiijisay in ku dhawaad 5 Askari looga dilay weerarkii shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Dowladda Burundi waxaa ay sheegtay in ciidamadeeda qeybta ka ah howlgalka AMISOM […]
Baarlamaanka Soomaaliaya Oo Saluuga Hawlhalka AMISOM Bilaabayana La Xissabtan Dhab Ah
Guddiga difaaca baarlamaanka Somalia ayaa shaaca ka qaaday inay la xisaabtamayaan taliska ciidamada AMISOM ee Somalia. Gudoomiyaha Guddiga difaaca baarlamaanka Xuseen Carab Ciise, oo la hadlay warbaahinta ayaa asheegay inaanu macquul aheyn in AMISOM ay […]